Huawei Watch GT Active sy Watch GT Elegant: famaritana sy vidiny | Androidsis
Huawei dia namela antsika tamin'ity herinandro ity niaraka tamin'ny finday vaovao. Ny marika sinoa dia nanolotra tamin'ny fomba ofisialy ny P30 sy P30 Pro, ho fanampin'ilay maodely tsotra indrindra, ny P30 Lite. Na dia tsy izy ireo ihany no vaovao nialan'ny mpanamboatra malaza antsika. Satria famantaranandro vaovao roa koa no natolotra. Momba ny Huawei Watch GT Active sy Watch GT Elegant io.
Ireo Huawei Watch GT Active sy Watch GT Elegant dia maneho a fanavaozana ny marika smartwatch an'ny marika sinoa. Modely roa izay havaozina amin'ny lafiny famolavolana sy ny famaritana. Ka asehoy izy ireo fa safidy tsara eny an-tsena ho an'ireo mpampiasa. Inona no azontsika antenaina?
Amin'ireo tranga roa ireo dia mahita habe roa isika amin'ny famantaranandro tsirairay, 46 sy 42 mm. Ka ny mpanjifa dia afaka misafidy izay toa mety aminy indrindra. Ho fanampin'izany, mahita fahaleovan-tena bebe kokoa isika roa, izay tsy isalasalana fa ho zava-dehibe amin'ny fiasan'izy ireo.
Huawei P30 Pro, fiheverana voalohany amin'ny avo lenta miaraka amin'ny zoom kokoa
1 Famaritana Huawei Watch GT Active sy Watch GT Elegant
Famaritana Huawei Watch GT Active sy Watch GT Elegant
Avelanay eto ambany miaraka amin'ny latabatra izay ahitanay ny ny famaritana an'ireo Huawei Watch GT Active sy Watch GT Elegant. Mba hahafahantsika mahita mazava tsara izay nomanin'ny marika sinoa ho antsika miaraka amin'ity andiany vaovao amin'ny smartwatch ity. Sehatra iray tadiavin'izy ireo hampitombo ny fisian'izy ireo amin'ity sehatry ny tsena ity. Ny fepetra arosony dia:
SCREEN AMOLED 1,39 santimetatra miaraka amina vahaolana HD 454 x 454 teboka 1,2-inch AMOLED miaraka amin'ny famahana HD 390 x 390 teboka
DIMENSION SY lanjan'ny X X 46.5 46.5 10.6 MG
Gramin'ny 46 X X 42.8 42.8 10.5 MG
CONNECTIVITY GPS, Bluetooth 4.2 GPS, Bluetooth 4.2
Sela Mpandray Hafanana Optical tahan'ny fo optika, gyroscope, barometre, haingam-pandeha, hazavana manodidina Optical tahan'ny fo optika, gyroscope, barometre, haingam-pandeha, hazavana manodidina
BATERA Fahaleovan-tena hatramin'ny 14 andro, fiampangana andriamby Fahaleovan-tena hatramin'ny 7 andro, fiampangana andriamby
OTHER Lentika anaty ATM 5 Lentika anaty ATM 5
mifanentana Android 4.4 na avo kokoa ary iOS 9.0 na avo kokoa Android 4.4 na avo kokoa ary iOS 9.0 na avo kokoa
PRICE 249 euros 229 euros
Ny fizakantena, izay nitombo tamin'ity faritra vaovao ity, dia iray amin'ireo hevi-dehibe amin'izany. Tian'i Huawei ny mpampiasa mba afaka mampiasa ny famantaranandron'izy ireo araka izay tratra. Azontsika atao ny mahita ny fomba hamelan'ny Huawei Watch GT Active antsika a mizaka tena hatramin'ny 14 andro. Zavatra izay tsy isalasalana fa mahatonga azy io ho safidy tena ahazoana aina. Na dia miankina amin'ny fampiasana ny fiambenana aza io fizakantena io.
Raha ny filazan'i Huawei dia nilaza fa ny fizakan-tena dia misy fiasa toy ny fandrefesana ny tahan'ny fo voahetsika, Fanatanjahan-tena 90 minitra isan-kerinandro, fampandrenesana hafatra, fiasan'ny torimaso amin'ny alina. Ka ny mpampiasa dia tsy maintsy afaka manao an'io ary maharitra mandritra ny 14 andro nampanantenain'ny orinasa mafy ny bateria. Raha ny maodely Elegant dia kely kokoa ny faharetany, ary mandritra ny herinandro fizakan-tena. Na dia famantaranandro tsy mitodika loatra amin'ny fanaovana fanatanjahantena aza izy io, toy ny amin'ny tranga hafa.
Voalohany indrindra hitantsika ny Huawei Watch GT Elegant Edition, izay natomboka tamin'ny haben'ny 42 mm fotsiny. Dika roa amin'izany no natomboka, amin'ny lafiny loko, dia ny Magic Pearl White sy ny Tahitian Magic Black Pearl, izay hitantsika amin'ny sary. Volavola mahaliana eo amin'ny efijery misy azy, izay tsy isalasalana fa ho tian'ny mpampiasa betsaka. Ity famantaranandro ity dia havoaka amin'ny vidiny 229 euro any amin'ireo magazay.
Etsy ankilany dia hitantsika ny Huawei Watch Active GT, izay tonga amin'ny habe 46 mm. Averiko indray, manana kinova roa izahay, amin'ity tranga ity dia hafa ny lokon'ny fehin-kibo. Manana modely misy fehiloha maitso ary iray hafa misy fehy volomboasary, izay hita eo amin'ny sary. Amin'ny anao, ny vidiny dia 249 euro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Huawei Watch GT Active sy Watch GT Elegant: famantaranandro vaovao avy amin'ny marika
Tsara ho an'i Huawei, hahazo P10 ihany koa ny P9
Ny safidy tsara indrindra amin'ny Google+ ho an'ny Android